China Glass tavoahangy tavoahangy famokarana labiera sy mpamatsy | Higee
Ny tsipika milina famenoana labiera dia mampifangaro ny fanasan-tavoahangy, ny famenoana ary ny fametahana masinina ho milina monoblock iray. Ny fizotrany dia tanterahina ho azy tanteraka. Ny famenoana tavoahangy PET na tavoahangy vera na afaka tavoahangy rehetra dia azo alamina.
Mifaninana amina tavoahangy tavoahangy labiera famokarana masinina Monoblock Production Line
Ireo singa masinina izay mifandray amin'ny ranon-javatra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, Ireo singa manan-danja dia vita amin'ny alàlan'ny fitaovana milina fehezin'ny isa, ary ny masinina manontolo dia eo ambany fanaraha-mason'ny sensor photoelectric. Izy io dia misy tombony amin'ny automatisation avo lenta, fandidiana mora, fanoherana mahery vaika, fitoniana avo lenta, tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany, sns.
Azontsika atao koa ny mampita ny tsipika famokarana labiera amin'ny fitaovana fitsaboana rano, ny rafitra fampifangaroana alohan'ny fitsaboana, ary ny rafitra fanangonana, ao anatin'izany ny milina fanoratana vita amin'ny tanany, ny milina famonosana sns sns.
1.Fandraisana Sakafo amin'ny tavoahangy tavoahangy
2.Mameno tavoahangy fanasana tavoahangy sy tavoahangy
Ity fitaovana famenoana labiera ity dia mandray ny teknolojia fandefasana tavoahangy amin'ny vozona mba hahatsapany ny fanasana, famenoana ary famonoana mandeha ho azy tanteraka. Izy io dia miaraka amin'ny fifehezana pression CO2, mba haharitra tsara hatrany ny haavon'ny rano. Ny fampiharana fitaovana fampandrenesana ho an'ny fitohanana tavoahangy, tsy fahampian'ny tavoahangy, fahasimban'ny tavoahangy, tsy fahampian'ny fatrany sns amin'ny toerana maro dia miantoka ny kalitaon'ny famokarana azy. Ny milina dia mahazo tombony amin'ny fahamendrehana avo, fahombiazana avo lenta, automatique avo lenta ary fandidiana mora, sns.
● miaraka amina firafitry ny fifindran-doha amin'ny tavoahangy tavoahangy, maharitra ny fampitana tavoahangy; tena mety sy haingam-pandeha hampiasa tavoahangy samihafa amin'ny famenoana masinina iray ihany amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haavon'ny conveyor sy ny faritra ifanakalozana.
● miaraka amin'ny teôlôjia famenoana Isobaric, haingana ny famenoana haingana ary avo ny haavon'ny; ny haavon'ny famenoana dia azo ovaina.
● Miaraka amin'ny clipper fanasan-damba amin'ny lohataona, ny tavoahangy poakaty dia ahodina 180 ° manaraka ny horonan-taratasy ho an'ny fanasan-damba ao anatiny; ny noosà fanasan-damba dia mandray ny felam-boninkazo miendrika lavaka maro hanasana ny tavoahangy tavoahangy, avo ny fahombiazan'ny fanasana.
● Mampiasà teknolojia an'i Frantsa ny masinina fanidiana, ny herinaratra avy amin'i tsela andriamby; Ny fisamborana satroka dia mandray indroa misambotra mba hiantohana ny fahamarinana. Ny herin'ny famandrihana dia azo ovaina, ny fametahana tiro tsy tapaka dia tsy hanimba ny satrony ary ny satrony dia voaisy tombo-kase ary azo antoka.
● Ny masinina iray manontolo dia miasa amin'ny efijery mikasika, fehezin'ny PLC sy ny mpanova matetika sns, miaraka amin'ny fiasan'ny tavoahangy tsy misy famahanana satroka, miandry rehefa tsy misy tavoahangy, mijanona raha sakanana ny tavoahangy na tsy misy satrony amin'ny fantsom-pitantanana.
Cap loader dia mampita ny satrony amin'ny masinina tsy misy satroka. Izy io dia manana ny fiasan'ny tavoahangy tsy misy fatrany kapa, fanaraha-maso mandeha ho azy.
4.Beer tavoahangy tavoahangy
Teo aloha: Milina tavoahangin-tsakafo PET tavoahangy mafana
Manaraka: Kitapo masinina famenoana alikaola tavoahangy